CIN Khabar कोरोनाले के सिकायो नेपाललाई ?
स्नेहा कर्ण आईतबार, चैत ९, २०७६, ११:५२:००
सन् २०१९ को डिसेम्बर ३१ मा एसियाली मुलुक चीनको वुहान शहरमा देखिएको कोभिड–१९ अर्थात् नोवेल कोरोना भाइरस पछिल्लो समय युरोपियन मुलुकहरूमा तीव्र रुपमा फैलिरहेको छ ।
छिमेकी मुलुक चीनबाट सुरु भएको यो भाइरसका कारण विश्वका शक्तिशाली मुलुकसँगै कमजोर मानिएका मुलुकहरूपनि प्रभावित भएका छन् र त्रसित पनि छन् ।
तर, यसमा नेपालका लागि खुशीको कुरा के मात्रै छ भने अहिलेसम्म नेपालमा कोरोना भाइरस फैलिसकेको छैन । सुरुवाती क्रममा एकजना नेपालीमा कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएपनि ति मानिस स्वास्थ्य उपचारपछि घर फर्किसकेका छन् ।
नेपालमा कोरोना भाइरस फैलि नसकेकोमा नेपालसँग यसको सावधानी र रोकथामका लागि प्रसस्तै समय छ । जसलाई नेपालले आफ्नो क्षमता अनुसार भरपुर प्रयोग गर्न सक्छ र गरिरहेको छ ।
नेपालले कोरोनाको संक्रमण नफैँलिदाको समयलाई पूर्व तयारी र सचेत हुनमा प्रयोग गरिरहेको छ ।
भाइरस रोकथामका लागि उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलको संयोजकत्वमा गठित समितिले नेपाललाई कसरी कोरोनाको संक्रमणबाट सुरक्षित राख्ने ? त्यसका लागि विभिन्न सावधानीसहितका निर्णय र तयारी गरिरहेको छ ।
सरकार सचेत हुँदै सचेतना कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहेको छ भने कोभिड १९ बाट जोगिन नागरिकहरू आफैंपनि सचेत हुँदै छन् ।
भक्तपूर सूूर्य विनायकका गणेश रावत आफू त सचेत हुनुहुन्छ नै आफ्नो परिवारलाई कसरी सुरक्षित राख्ने त्यसमा पनि सचेत हुनुहुन्छ ।
घरबाट बाहिर निस्किँदा मास्कको प्रयोग गर्नेदेखि हात धुने, सरसफाइमा ध्यान दिने र अहिले घरमै सबैजना बसिरहँदा घरका सदस्यलाई पनि नआत्तिकन बस्न परामर्श दिने काम उहाँले गरिरहनुभएको छ ।
बाराका अनिता यादव पनि कोरोना भाइरसको संक्रमण र बच्ने उपायबारे सचेत हुनुहुन्छ । भाइरस नेपालमा फैलि नसकेपनि सरसफाइमा उहाँले विशेष ध्यान दिने गर्नुभएको छ ।
अनिता र गणेश मात्रै होइन, अधिकांश नागरिक सचेत हुन थालेका छन् ।
यस वर्षकै सुरुवातदेखि नै स्क्रब टाइफस, डेंगु, मौसमी रुघाखोकी, झाडापखाला लगायतका रोगहरु देखिए । जसका कारण ६० भन्दा धेरै नागरिकको मृत्यु भयो ।
यस्ता रोगले पनि आम नागरिक र सरकारलाई केही न केही सिकाइरहेकै हुन्छन् । विश्वव्यापी माहामारीको रुप लिएको कोभिड १९ बाट नेपालले सिकाइ गर्दैछ ।
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर विकास देवकोटाले भाइरस नेपाल भित्रि नसकेको अवस्थामा नेपालले पूर्व तयारी र सावधानी अपनाउने काम सिक्दै गएको बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘भाइरस भित्रिसकेको अवस्थामा नेपालले के गथ्र्यो त्यो अहिले भन्न सकिंदैन । त्यो कसैलाई थाहा हुने कुरा भएन । किनभने नेपाल निकै कमजोर मुलुक छ । त्यस कारणपनि नेपालले माहामारी नेपाल नभित्रिंदै तयारीमा जुटेको छ । जुन अर्को कुनैपनि रोग वा कोरोनाका लागि पनि तयारी हो ।’
विभिन्न ठाउँमा अस्थायी अस्पताल निर्माणको काम २४ घण्टा, ७२ घण्टा भित्रै निर्माण हुन थालेको छ । मास्क बनाएर वितरण गर्न थालिएको छ । यहि काम पहिले नै भएको भए नेपालमा सम्भवतः मास्क पूर्ति गर्न सकिन्थ्यो ।
विश्वव्यापी माहामारी बनेको कोभिड १९ अर्थात् नोवेल कोरोना भाइरसका कारण नेपालमा पनि आम नागरिकमा त्रासको अवस्था छ ।
विश्वमा झण्डै १३ हजार बढि मानिसको मृत्यु हुँदा नेपालमा एक जनामा संक्रमण भएपनि निको भईसकेको अवस्था छ र अरु मानिसमा देखिएको छैन । कोभिड १९ ले दुःख मात्रै दिएको छैन, विश्व समुदायसँगै नेपाललाई पनि केही न केही सिकाइरहेको छ ।
कोभिड १९ अर्थात् नोबेल कोरोनाको त्रासले बजारमा मास्क र सेनिटाइजरको अभाव छ । सोही कारण कतिपय स्थानीय सरकारले मास्क बनाउने तालिम चलाएका छन् । ललितपुर महानगरले त, मास्कसँगै सेनिटाइजर पनि बनाएको छ ।
प्रदेश सरकारले पनि क्षमता अनुसारको तयारी गरेका छन् ।
कोभिड १९ ले नेपाल र नेपालीलाई सचेत बनाएकोे बताउनुहुन्छ, पूर्व स्वास्थ्य सचिव डा.प्रविण मिश्र ।
उहाँले नेपालमा कोरोना भाइरस भित्रिन नपाउँदै नागरिक आफैं सचेत हुन थालेका र सरकारले पनि राम्रो तयारी गर्दै गएको बताउनुहुन्छ ।
सरकारले गरेको हरेक निर्णय स्वागत योग्य भएपनि भारतसँगको सीमा नाकामा अझै कडाइ हुन नसक्दा त्यसले अझै संकट नेपालमा भित्रिने सम्भावना रहेको भन्दै उहाँले यसमा सरकारले जतिसक्दो चाँडो ठोस निर्णय गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
कोभिड १९ फैलिएपछि विश्वभरीका मानिसहरुले हात मिलाउन र अंकमाल गर्न छाडेका छन् । बरु अभिवादन स्वरुप नमस्ते गर्ने नेपाली सँस्कृति विश्वव्यापी बन्दैछ ।
कोरोना भाइरसको संक्रमणको डरसँगै नेपालीहरूको आनीबानीमा परिवर्तन आएको छ ।
- हात मिलाउनेबानी त्याग्दै नमस्कार गर्ने परम्परा फेरि सुरु भएको छ ।
- हात धुन नजान्नेहरूले हात धुन सिक्न र जान्न थालेका छन् ।
- साबुन पानीले हात धुने बानीको विकास भएको छ ।
- उद्यमशिलतालाई ध्यानमा राखी आफैं मास्क र ह्यान्ड स्यानिटाइजर बनाउन थालेका छन् ।
- सरसफाइमा अझ बढी ध्यान दिन थालेका छन् ।
- मास्कको प्रयोग गर्नुका साथै ह्यान्ड स्यानिटाइजरको प्रयोगपनि गर्न थालेका छन् ।
- खानपानमा तागतिलो र रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउने आहारको सेवन गर्न थालेका छन् ।
- अभिभावकले बालबालिकालाई घरमै भएपनि रोगबाट जोगिने उपाय र मानसिक रुपले परामर्श दिन थालेका छन् ।
- कम समयमै पनि अस्थायी अस्पताल बन्न सक्छ भन्ने सकारात्मक कामपनि सुरु हुन थालेको छ ।
प्रकाशित मिति: आईतबार, चैत ९, २०७६, ११:५२:००